Uphando: Ngaba Ukuqokelela okanye Ukuzibandakanya Kubaluleke ngakumbi? | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 1, 2013 NgeCawa, ngoMatshi 31, 2013 UJenn Lisak Golding
Njengabathengisi, sivelisa umxholo veki nganye (okanye yonke imihla) ejolise kwiimarike zethu ekujoliswe kuzo, sikhuthaza ithemba lethu lokufuna nokufunda umxholo wethu. Kwelinye icala lengqekembe, sinethemba lokuba baya kuzibandakanya kwaye banike izimvo kumxholo wethu ukuze sikwazi ukuqala incoko (esekwe kwimvume) kunye nabo. Kwelinye icala, sifuna ukuba bagcwalise iifom zamaphepha okufika ukuze bafumane amaphepha amhlophe okanye izifundo zetyala, ukuze sikwazi ukuqokelela idatha ngakumbi ukuba ngoobani, basebenzela inkampani, kwaye zeziphi iintlobo zomxholo abanomdla wokufumana . Nokuba yeyiphi na indlela, siqala inqaku lokunxibelelana namathemba ethu ngethemba lokukhulisa olo lwalamano ekuhambeni kwexesha ukuze lubuguqule lube luguquko.
Ukuzibandakanya kunye nokuthetha ngethemba kwi-intanethi kunokuba luncedo kakhulu, kwaye kunokuqala ubudlelwane "bendalo". Ithemba linokukhetha ukuba ungazibandakanyi negama lakho, kwaye nangona ukhuthaza ngokubonakalayo kwaye ubonelela ngesiqulatho, sidala ithuba lokuba bafikelele ngokwemigaqo yabo. Ukukhulisa la mathemba kunokuba nzima kwaye kuthathe ixesha elide, kodwa kuyabavumela ukuba banxibelelane nathi ngendlela yabo ngexesha labo.
Kodwa sifuna ukubamba izikhokelo "ezithambileyo" ukuze sikwazi ukulandelela intshukumo xa betyelele indawo yethu okanye bezibandakanya nophawu lwethu ngenye indlela. Kungenxa yoko le nto senza amaphepha okufika kunye neefom ukuze sikwazi ukufumana ulwazi ngakumbi malunga nethemba lethu kwaye siqale ukufikelela kubo ngephulo lethu lokondla. Sinombono ocacileyo wokuba banomdla kangakanani, kunye nokuba yeyiphi imixholo ebatsalayo.
Ke, oku kucela umbuzo: yeyiphi ebaluleke ngakumbi, ukuqokelela idatha okanye ukubandakanya abathengi? Ucinga ntoni? Ewe kunjalo, zombini zibalulekile ngokwembono yentengiso, kodwa yeyiphi le misebenzi inceda ishishini lakho lifike kuguquko?
Khetha enye yeenketho kwi Uvavanyo lwe-Intanethi apha ngezantsi, ixhaswe ngumxhasi wethu wetekhnoloji,IFomstack . Basebenzela amashishini amancinci ngomakhi weefom ezikwi-Intanethi, amaphepha okufika, kunye nemikhankaso ye-imeyile, ebandakanya konke kubahlalutyi Umdibaniso ongenamthungo kunye nesoftware esele ikho enjengeMailchimp, iPayPal, amaxwebhu kaGoogle, kunye nokunye.
Sixelele ukuba ucinga ntoni kwaye siza kubhala malunga neziphumo kwiiveki ezi-2! Zive ukhululekile ukuba wabelane ngezimvo zakho apha ngezantsi.
[IFomstack id = 1391931 jonga ukhiye = BKG2SPH7DU]
tags: ukuqokelelanxaxhebaimoindlela yobume
Uhlaziyo lweNethiwekhi yeNtlalontle yemihla ngemihla ukusuka kwiNutshellMail